Sida loo tag Music la A Music Tagger
> Resource > Video > Sida loo tag Music Si fudud ku Mac
Sida taageerayaasha music weyn, waxaa laga yaabaa in ay music digital waxaad maqli marar badan maalmahan. Waa sahlan sababta oo ah helitaanka fudud iyo macluumaad dhamaystiran. In la soo dhaafay, si dhib leh goosin ka mid ah music ka dhigtaa magacyadii reer binu Track 1, Track 2 ama dad kale kuu sheegi karaan. Laakiinse haatan, tag ID3, fannaanka, album, sifayn xitaa tahay album, waxaa gundhig in files music ah. Sidaas waxaad si fudud u garan karaan oo ay qabanqaabiyaan files music aad.
Si kastaba ha ahaatee, tag ID3 waxaa had iyo jeer ka maqan haddii aad files music ka beddelaya ama diiwaan aad u hesho. Ma suroobi karaa waddo in DEAD music effortlessly? Haa, Wondershare TidyMyMusic u Mac ( TidyMyMusic Wondershare ) waa tagger kaamil ah music si ay kuu caawiyaan. Waxaa ka aqoonsan kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan music, sida artist, farshaxanka iyo xitaa lyrics. Aan hubi sida loo isticmaalo hoose.
1 dar music oo dhan si ay u tagger music ah
Marka software tagging music ka fura, waxaa bilaabi doonaan in ay iskaan maktabadda Lugood iyo si toos ah dispay music ee saxaarad file muujiyay sida hoos ku qoran.
Waxaa laga yaabaa inaad u music ma maamula Lugood kaydinta dheeraad ah. Si aad u dajiyaan songs kuwa fayl song, waxaad u baahan tahay riix Music ah tab hagaagsan ee bar dhanka bidix iyo jiidi folder song in ay saxaarad faylka gacanta ama guji badhanka File Open.
2 Bilow in DEAD music
Hadda oo files music oo dhammu waa wada barnaamijka, waxaad bilaabi kartaa inaad DEAD music ah. Dooro mid ka mid song oo riix badhanka Aqoonso on xaq u hooseysa. Tagger music ayaa bilaabi doonaan in ay raadiso macluumaadka internet ama database goobtii ka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doorato oo heeso badan hees, badhanka Aqoonso bedeli doona badhanka Aqoonso soo xulay. Riix badhanka iyo barnaamijka baadhi doonaa macluumaadka oo dhan songs soo xulay. Iyo in la helo macluumaad loogu talagalay music oo dhan, riix badhanka Scan in madax. Intay sii socdaan, macluumaadka waxaa laga heli doonaa, oo xataa wuxuu tus ka kala tagi kartaa.
Markaas ka dooro mid song oo guji badhanka codso in lagu daro dhamaan macluumaadka ay u heesaha.
3 Edit macluumaad tag sida aad jeceshahay
Mararka qaarkood, waxa barnaamijka ka helo database ma idinku raalli laga yaabaa. Waxaad ku edit karaa gebi ahaanba keligaa. Guji Edit icon hoose iyo nooca ay hadalkiisa kasta oo aad jeceshahay. Function Tani gebi ahaanba waa mid ikhtiyaari ah sida ay caadooyinka kuu gaar ah.
Shaqo kale oo xusid mudan tahay in aad sidoo kale ka ciyaari kara music by double-gujinaya thumbnail file barnaamijka ka. Ma doonaysaa in ay haatan isku day? Hel waxaa lagala soo bixi oo lagu rakibay on your computer iyo aad u bilowdaan mashruuca isla markiiba.